Download Isimo Sezulu Kanye Ne-Radar - Mahhala Apk Latest Version App For Android Devices
izinhlelo zokusebenzaIsimo Sezuluisimo sezulu kanye ne-radar - mahhala
Uhlelo lokusebenza lwezulu lomsindo - i-radar imvula, iwijethi yesimo sezulu, sezulu sezulu nokuningi!
4.5 (90.0%) 771,286 Amavoti
Izici eziyinhloko zohlelo lokusebenza lamahhala le-Weather & Radar:
• Isibikezelo sezulu sehora njalo nesimo sezulu
• Isimo sezulu sezinsuku ezingu-14
• I-radar yezulu ehlala emhlabeni jikelele
• Amazinga okushisa kwamanzi angogwini
• Ulwazi lwezemidlalo ye-Ski neyebusika
• Umjaho wezulu
🌞 Uhlelo lokusebenza lwemozulu
Hlala usesikhathini ngezikhathi ngohlelo lokusebenza lamahhala le-Weather & Radar! Njalo wazi ukuthi ilanga lizophuma yini, ukuduma kwezulu kuyasondela, uma kuvula imvula, isichotho noma iqhwa. Uhlelo lokusebenza lesimo sezulu luzobonisa ngokunembile izimo zezulu zamanje zendawo yakho ngqo e-US nakwezinye izindawo emhlabeni wonke.
🌦 Isibikezelo sezulu sezulu
Konke ngesimo sezulu shazi! Okushiwo yikusasa lokushisa, imvula, amathuba okushisa, iqhwa, umoya, amahora elanga, ukuphuma kwelanga nokushona kwelanga. Ukubonisa okuningiliziwe kwengcindezi yomoya, amazinga omswakama kanye ne-UV Index. Hlela phambili phambili nesici se-14 sezulu se-look out.
☔ Isimo SezuluIsikhathi
Ngaphezu nje kwe-radar yakho ejwayelekile yemvula! Bheka ibalazwe le-radar lakamuva, elibandakanya izindawo zokumboza ifu, ukushisa kwelanga, imvula, iqhwa, isichotho, ukuduma kwezulu nokukhanyisa kwamandla. Lesi sici sikuvumela ukuba ubone izimo zemvelo zezindawo ezihlukahlukene ngesikhathi esisodwa. Kungakhathaliseki ukuthi useNew York, e-Los Angeles, e-Washington DC noma e-Miami, ulandele ukuhamba kwamafomu amafu, izimo zezulu neziphepho ezisebenzayo, ukubona, uma zizoshaya noma zedlula indawo yakho.
🌞 Iwijethi Yemozulu
Ukwaziswa kwesimo sezulu sewiwijethi indawo yakho yamanje kwifomethi eqondile esikrinini sasekhaya sedivayisi yakho. Khetha kusuka ku-4 amafomethi wewijethi ehlukene futhi uwalinganise ngokusho okuthandayo.
🌊 Amazinga Okushisa Emanzini
Phila eduze kolwandle? Ungathembela kuhlelo lokusebenza lamahhala le-Weather & Radar ukubona amazinga okushisa kwamanzi ezindaweni zasogwini.
❄ Ulwazi lweqhwa / Ezemidlalo zasebusika
Ukuhlela uhambo lokuhamba ngesondo lokugcina? Imozulu & Radar kuzokutshela ukuthi iqhwa liphi! Finyelela yonke i-ski nolunye ulwazi lwezemidlalo yasebusika ezindaweni ezihlukahlukene eNyakatho Melika naseYurophu.
🌎 Isimo Sezulu Sezulu
Ungathembela kuhlelo lokusebenza lamahhala le-Weather & Radar yonke into kusuka ngesikhathi sokuhamba kwakho ukuze udideke lawo mvula, ukuhlela amaphrojekthi wangaphandle, imisebenzi nemicimbi. Ukuhlela uhambo noma unelungu lomndeni kwelinye izwe? Londoloza noma iyiphi indawo futhi ubone izimo zamanje zanoma iyiphi inombolo yezindawo zomhlaba ngesikhathi esisodwa. Isimo sezulu sezwe kutholakale kalula!
Sebenzisa uhlelo lokusebenza lesimo sezulu mahhala lokukhangisa nokuthenga kwangaphakathi nohlelo!
Uma unemibuzo noma imibono, xhumana nathi ngomusa ku info@weatherandradar.com.
MyRadar is a fast, easy-to-use, no-frills application that displays animated weather radar around your current location, allowing you to quickly see what weather is coming your way. Just start the app, and your location pops up with animated weather!The map has the standard pinch/zoom capability...
isimo sezulu esibhakabhakeni
isikhathi sangempela siphezulu sezulu nesimosezulu
ukuqapha imakethe yamasheya
Isibikezelo sezulu nesimo sezulu
I-radar yesimo sezulu
isimo sezulu sezulu - isimo sezulu namuhla zokusebenza 2019
I-thermometer yezinga lokushisa elincane
i-radar sezulu - isimo sezulu: namuhla nangomuso
accuweather: izixwayiso zesimo sezulu kanye nesiphepho sezulu esiphezulu
Bukhoma Isimo sezulu - Isibikezelo sezulu 2019
Isibikezelo sezulu esibukhom: Update Weather Daily
noaa sezulu radar nezixwayiso
isibikezelo sezulu esinembile
Isimo sezulu siphila - isimo sezulu se-radar
Isimo sezulu sendawo nesimo sewashi
windy.app: ukubikezela umoya kanye nesimo sezulu sasolwandle
Isimo sezulu sibikezela futhi iwashi iwijethi
uhlelo lokusebenza lesimo sezulu esibukhoma
izimo zezulu zihlala namabalazwe ase-radar
buoyweather - sezulu olwandle